Ukuqeqeshwa kwezinwele zezingubo Ukugqoka izinwele - I-Hairdresser - GO! ISIKHATHI SE-SPECTRUM (ISIKHATHI SESIKHATHI // DBSO // ICAMPUS BACKGROUND)
Yenza umhlaba ube mnandi kakhulu
Sinikeza ukuqeqeshwa okungabizi
uzinwele nokugqoka izinwele
Isigqoko sezicathulo kanye nesicocisi sezinwele
Njengengubo yokugqoka unganika kokubili amadoda nabesifazane ukusika okulungile. Kukhona ukugcizelela kakhulu ukunakekelwa kwezinwele, ukugeza nokubala. Ufunda nokuthi ungabeka kanjani izinwele zekhasi zesikhashana. Ufunda nokuthi ungayinakekela kanjani ama-wigs ekuqeqesheni. Siphinde sikufundise izinto eziyisisekelo zokunakekela ubuhle.
Isigqoko sezinwele ezizimele
Uma usuqedile ngempumelelo ukuqeqesha izinwele ungakwazi ngokukhethekile njengomphathi ozimele we-salon yezinwele. Lokhu kuqeqeshwa okuqhubekayo kuyathandeka kakhulu uma ufuna ukuqala ibhizinisi lakho.
Uthanda ukusebenza kumakhasimende
Ukuqeqeshwa kwezinwele kudlulela iminyaka emibili kuya kwemibili kuye ngokuthi uhlangenwe nakho, ikhono lakho nolwazi lwakho lwangaphambili.
Isikhwele siwumsebenzi we-bottleneck.
Ababheki bezinwele badume kakhulu emakethe yezabasebenzi.
Ukuqeqesha abakhwele izinwele ngokuningiliziwe
Bheka lapha amathebula okufunda we-training time-time Kapper:
Inhloko yoMnyango X